Fanamarinana Splunk - Fanontaniana sy valiny fanadihadiana - ITS Tech School
Ny fandaharam-pianarana Splunk dia hanome anao ny fahaiza-manao izay andrasana hisafidy ireo angon-drakitra noforonina mampiasa ny Splunk rindrambaiko. Ny Splunk Analytics dia hanome anao fahafahana hanadihady be dia be. Ity fanofanana momba ny Splunk ity dia ahitana ny fanofanana amin'ny fanadihadiana tena ilaina, fizarana sy famahana ny valiny, fanaovana labels sy karazana fisehoan-javatra, mamokatra tatitra, ary famoronana sary. Izany dia hanampy anao hanamboatra engineering, Splunk syslog, server syslog, fanadinana log, fanairana, fanadihadiana, ary tailboards ary hahatonga anao ho mpandrindra Splunk mahomby.
Ny fanatanterahana ny Splunk dia hanova ny raharaham-barotrao ary hitondra izany amin'ny manaraka. Na izany aza, ny fanontaniana dia hoe: Manery ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao ho Splunker ve ianao? Arakaraky ny lozam-pifamoivoizana no eny, dia manolora tena ho an'ny fihaonana an-kalamanjana indrindra ho an'ny mpiasam-panjakana raha jerena ny zava-misy fa mahagaga ny mpanohitra. Azonao atao ny manomboka amin'ny fanandramana ireo fanontaniana fanadihadiana Splunk tena fantatra indrindra izay voalaza ao amin'ity bilaogy ity.
Fanontaniana Fanontaniana sy Valiny 10 momba ny Fanamarinana Splunk
Inona no splunk? Nahoana no ampiasaina ny Splunk mba hamongorana ireo angon-drakitra?
Inona avy ireo ampahany amin'ny fanenon-java-manidina?
Inona no fampiasana ny Master Master ao amin'ny Splunk?
Inona ny fifandraisana DB?
Hazavao ny 'fanitsakitsahana ny fahazoan-dàlana' avy amin'ny fomba fijery Splunk.
Inona ny lisitry ny rindran-damina?
Inona ny fahasamihafana eo amin'ny stats sy ny baikon'ny eventstats?
Inona no sobika splunk? Hazavao ny atao hoe lifecycle.
Hazavao ny fahaizan'ny Alert Manager?
Hazavao ny fahasamihafana misy eo amin'ny fitadiavana loham-pikarohana sy ny fikarakarana ny lohanao?
Splunk dia Google amin'ny angona angona. Fitaovana rindrambaiko / motera ampiasaina amin'ny famoronana, fijerena, fanambarana, ary fandinihana ny angon-drakitra momba ny orinasa. Splunk dia mandray ny angon-drakitra mahasoa ary manova azy ho amin'ny fahaiza-manaon'ny fahaiza-miasa, amin'ny fanolorana fotoana ahafantarana ny data amin'ny alàlan'ny takelaka, fampitandremana, tatitra sy ny sisa.
Splunk dia ampiasaina amin'ny famongorana ny angona angon-drakitra satria afaka manome ny traikefa amin'ny fitantanana ny fangatahana, ny tetik'asa IT, ny fiarovana, ny tsy fitoviana, ny famantarana ny fahadisoana, ny fahitana ny risika sy ny sisa.
Jereo ny lohanao - manome ny GUI mikatsaka
Indexer - milahatra ny angon-drakitra sy ny angona.
Forwarder - Mandrindra ny Indexer ny kitondro
Deploy server - Manomana sombin-drakitra misimisy ao amin'ny fepetra niparitaka.
Ny license Ace amin'ny Splunk dia tompon'andraikitra amin'ny fiantohana fa ny fepetra tsara indrindra amin'ny data dia napetraka. Ny fahazoan-dàlana Splunk dia miankina amin'ny volavolan-datondro mandeha amin'ny sehatra ao anaty varavarankely 24hr ary manaraka ireo andalana ireo, miantoka fa ny tany dia mitoetra ao anatin'ny fetran'ny volavolam-pandrefesana.
Kitapo SQL amin'ny ankapobeny dia manome fahafahana anao hampiditra tsy misy daty ny data miaraka amin'ny fangatahana Splunk sy ny tatitra. Izany dia manome ny tambazotra azo antoka sy azo ekena ary mahomby eo amin'ny Splunk Enterprise sy ny tambazotra mifandraika.
Raha toa ka mandao ny fetran'ny angon-drakitra ianao, dia haseho anao ny 'fanitsakitsahana license'. Ny fahazoan-dàlana fampitandremana izay natsipy dia haharitra mandritra ny andro 14. Ao amin'ny lisitry ny orinasa na orinasa dia azonao atao ny manamarika ny 5 ao anaty varavarankely mihetsika iray andro 30 alohan'ny handefasana ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny Indexer sy ny tatitra. Amin'ny endrika maimaim-poana, dia manondro fotsiny ny 3 fampitandremana.
Ny lisitry ny famintinana dia ny antontan-drakitra fanontana (ny rakitra ampiasain'ny Enterprise dia tsy ampiasaina amin'ny làlana tsy fantatrao). Amin'izay fotoana izay dia misafidy ny hanao karazana lisitry ny lisitry ny lisitry ny synopsis ianao fa mety mila manao tahiry fanampiny.
Ny fehezan-dahatsoratry ny fiantsoana dia manazava ny tsipiriany momba ny saha misy anao amin'izao fotoana izao ary manavotra azy ireo ho toetra vaovao amin'ny sehatra vaovao. Eventstats dia toy ny fiampangana ny statistika, ankoatra ny vokatra fanangonana dia ampidirina ao amin'ny hetsika tsirairay ary raha toa ka mifandray amin'io hetsika io ny aggregate. Eventstats dia manoratra ny fangatahana fandrefesana toy ny antontan'isa, na izany aza, dia mametraka azy ireo amin'ny antontam-baovao voalohany.
Ny katala misy rakitra voarakitra dia fantatra amin'ny hoe container Splunk. Hita ao koa ny fisehoan-javatra iray manokana. Ny fiainam-pianakavian'i Pail dia mitaky ny fanaovana ny dingana manaraka:
Hot - Ahitana tahirin-kevitra efa voatazona tato ho ato ary misokatra ho an'ny famoronana. Ho an'ny lisitra tsirairay, misy farafaharatsiny iray farafahakeliny azo henoina
Warm - Nafana be avy amin'ny hafanana ny angona mafana
Cold - Nalaina avy amin'ny hafanana ny angona antonony
Frozen - Ny data dia nifindra avy amin'ny hafanana. Ny sora-baventy dia mamafa ireo angon-drakitra henjana dia mazava ho azy fa ny mpividy ihany koa dia afaka mampiditra azy io.
Thawed - Fampahalalana miorina amin'ny rakitra an-tsoratra. Amin'ny zoma tsy afaka manasongadina angon-drakitra, afaka averinao any amin'ny rakitsoratry ny (manodinkodina) izany.
Ny mpanara-maso voatendry dia mampiseho ny fon'ireo ankamaroany amin'ny fahatarana dia aleo mitandrina, ohatra, fisehoan-javatra mivonona. Izy io dia manome fifandraisana ahafahana mahita ny lisitra voasokitra avy amin'io fampitandremana mivezivezy io. Izany koa dia mampiseho ny anaran'ny vonona, fampiharana, karazana (voaverina, real-time, na fikandrana mihetsika), fahamendrehana sy fomba.
Mitadiava loham-pirahalahiana dia ny fanangonana ny serasera mifandraika mba hizarana enta-mavesatra, ny Configuration sy ny angona mpanjifantitra rehefa mijery ny vondrona misy azy dia singa ao amin'ny fikirakirana fikirakirana fikirakirana dia mameno ny maha-vondron'olona ifotony. Koa satria ny antokon'olom-pifaneraserana no manohana ny ampahany mifanaraka amin'ny ampahany, ny dachbords sy ny asa aman-draharaha sahala dia afaka mihazakazaka ary mahita avy amin'ny olona tsirairay avy ao amin'ny bunch.
50 Fanadinadinana mahaliana indrindra Fanontaniana azonao atao amin'ny interviews